သင့်ကလေးကို စကျွေးသင့်တဲ့အသီး (၅) မျိုး - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးအာဟာရ » သင့်ကလေးကို စကျွေးသင့်တဲ့အသီး (၅) မျိုး
ကလေးကို အစားစကျွေးတဲ့အချိန်( နို့ဖြတ်တဲ့အချိန်၊ ထမင်းစကျွေးတဲ့အချိန်)ဟာ ကလေးရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ အရမ်းအရေးပါတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နို့စို့အရွယ်ကနေ အစားစစားချိန်မှာ ကလေးကို ဘာတွေကျွေးသင့်သလဲ၊ ဘာတွေမကျွေးသင့်ဘူးလဲဆိုတာ မေမေတို့အတော်များများမှာ ခေါင်းစားရတဲ့ပြဿနာပါ။ အထူးသဖြင့် အသီးအနှံကျွေးတဲ့အခါပေါ့။ ဒီအတွက် မေမေတို့ စိတ်မရှုပ်ရအောင် ကလေးငယ်တွေအတွက် အာဟာရဓာတ်အပြည့်ဝဆုံးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး အသီး (၅) မျိုးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကလေးကို အဆီဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့စားစရာတွေ မကျွေးသင့်ဘူးလို့ မိဘတော်တော်များများက ယုံကြည်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အဆီဓာတ်ဟာ ဗီတာမင် A၊ C၊ D နဲ့ E တို့လို အဆီမှာပျော်ဝင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို စုပ်ယူပေးနိုင်တာကြောင့် ကလေးငယ်ရဲ့စားသုံးမှုအာဟာရထဲမှာမဖြစ်မနေပါဝင်သင့်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကလေးရဲ့အရေပြားကျန်းမာရေးနဲ့ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း အထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ monounsaturated fats တွေနဲ့ ဗီတာမင် E လို အကျိုးပြုအဆီဓာတ်တွေအပြင် folate ၊ ပိုတက်စီယမ်နဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုတွေ ကြွယ်ဝတာကြောင့် ကလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးအသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ကြိတ်ချေလိုက်ရင် နုညက်တဲ့အနှစ်၊ ဆိမ့်တဲ့အရသာကြောင့်လည်း အစားစားတတ်ခါစ ကလေးငယ်တွေက ထောပတ်သီးကို လက်ခံလွယ်ကြပါတယ်။ စားရတာအရသာပိုရှိစေဖို့ တခြားအသီးတွေနဲ့ရောတာမျိုး၊ ကလေးအကြိုက် အရသာသစ်ဖန်တီးတာမျိုးလုပ်ကျွေးလို့ရပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးကို အာဟာရပြည့်ပြီးအရသာရှိတဲ့အသီးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အပြင် နို့ဖြတ်ခါစ ကလေးငယ်လေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးအဖြစ် ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ အစာကြေညက်လွယ်တဲ့အမျှင်ဓာတ်၊ ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုနဲ့ အကျိုးပြုကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကြွယ်ဝလို့ ကလေးကို လေပွခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်းတွေ မဖြစ်စေဘဲ ခွန်အားပြည့်စေပါတယ်။ ကလေးဝမ်းချုပ်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းလျှောခြင်းတို့အတွက်လည်း ငှက်ပျောသီးက ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးနိုင်၊ ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများလှတဲ့ပန်းသီးက တခြားအစားအစာတွေမစားခင်မှာ အစာခြေစနစ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ပါဝင်မှုမများပေမယ့် အမျှင်ဓာတ်ကကြွယ်ဝပါတယ်။ ပန်းသီးမှာပါတဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကြောင့် ဆီးချိုသွေးချိုဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေတယ်၊ ကိုလက်စထရောပမာဏကိုလျော့ကျစေတယ်၊ မျက်စိအတွင်းတိမ်မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ free radicals တွေရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကလေးကို စကျွေးသင့်တဲ့ အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
စပျစ်သီးလေးတွေကလည်း ပန်းသီးလိုပဲ အစာခြေစနစ်အတွက် အထောက်အကူပေးတဲ့အပြင် ရေဓာတ်နဲ့အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားလို့ ကလေးကိုဝမ်းမချုပ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပိုတက်စီယမ်ပါဝင်မှုကြောင့် သွေးတိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပြီး ဓာတ်မတည့်မှုအန္တရာယ်ကိုလည်းလျော့နည်းစေပါတယ်။ polyphenols လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ကြောင့် အဆုတ်ကင်ဆာ၊ ပန်ကရိယကင်ဆာ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနဲ့အူမကြီးကင်ဆာတို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုနည်းပါးစေပါတယ်။
စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘလူးဘယ်ရီ၊ ချယ်ရီ၊ ဘလက်ဘယ်ရီအပါအဝင် ဘယ်ရီသီးနွယ်ဝင်တွေက ကလေးအတွက်ရော၊ လူကြီးအတွက်ပါ သင့်တော်ပါတယ်။ အရောင်ရင့်လေ အာဟာရဓာတ်ကြွယ်ဝလေဖြစ်တဲ့ ဘယ်ရီသီးတွေက ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပြည့်ဝပါတယ်။ ဘယ်ရီသီးတွေက ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး မှတ်ဥာဏ်ပိုကောင်းစေတယ်လို့ သုတေသနတွေက ဖော်ပြကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးလေးတွေကို သရေစာအဖြစ်နဲ့ ဘယ်ရီသီးတွေကျွေးတာ၊ ကြိတ်ပြီးဖျော်ရည်လုပ်ပေးတာ ဒါမှမဟုတ် အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့တခြားအသီးတွေနဲ့ ရောကျွေးနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ရီသီးတွေမှာ DHA အပါအဝင် Omega-3 fatty acids တွေလည်းကြွယ်ဝတဲ့အတွက် ကလေးရဲ့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ အထောက်အကူပိုဖြစ်စေမှာပါ။ DHA (docosahexaenoic acid) ဆိုတာ omega-3 fatty acid တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အမြင်အာရုံနဲ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါပါတယ်။ အရိုးကျန်းမာရေးအတွက် ကယ်လ်စီယမ်လိုအပ်သလို ဦးနှောက်အတွက် DHA လိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးမှာလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေ မပြည့်ဝဘူးဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မယ့် လက္ခဏာရပ်များ
သင့်ကလေးရဲ့ နေ့စဉ်စားသောက်မှုမှာ ပါဝင်သင့်တဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်
ကလေးငယ်အတွက် အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ နေ့လည်စာထမင်းဗူး ပြင်ဆင်မယ်
ကလေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် လိုအပ်သောအာဟာရများနှင့် ၄င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများ
The 10 best foods for babies. https://www.babycenter.com/0_the-10-best-foods-for-babies_10320505.bc. Accessed December 6, 2017.
Top 10 fruits good for kids. http://healthbeginswithmom.com/top-10-fruits-good-kids/.